> Resource> iOS> 5 Music ngwa ọdịnala n'ihi iOS 7 Ị Pụrụ Ịbụ na Mara
Ị na-ebe a n'ihi na ị ọchịchọ ịmata ihe ndị 5 music ngwa ọdịnala n'ihi iOS 7 i nwere ike na-amaghị, ziri ezi? OK, nke a bụ oge anyị na-amalite ịchọ obere ma ama, ma magburu onwe music ngwa ọdịnala n'ihi iOS 7. Ọ bụghị na ama music ngwa, dị ka Pandora, Spotify, last.fm, ma ọ bụ ọbụna Youtube, na-adịghị mma. Ma, anyị kwesịrị inyocha ọzọ bara uru music ngwa na anyị dị mma, ndụ. Ka na-lee anya na 10 music ngwa ọdịnala n'ihi iOS 7.
Ọ bụ ezie na ulo oru na 2008, ma enweghị nke nkwalite, 8tracks bụghị dị ka ma ama dị ka ndị m kwuru n'elu. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị hụrụ ya n'anya. Ọ bụ ihe na Internet redio. Ugbu a, o iche nsụgharị iPhone na iPad. Ị nwere ike ibudata na wụnye music ngwa gị iOS 7 dabeere iPhones ma ọ bụ iPads inyocha ihe karịrị ihe karịrị 650,000+ mixes nke na-kere ndị mmadụ. Ma i nwere ike ịkekọrịta mixes na ị na-kere na ndị ọzọ ka mma. Ị na-enwe ike ịhụ gị music site na itinye ọ bụla mode, genre, ọrụ ma ọ bụ na-ahọpụta otu n'ime ndị edemede 8tracks nyere.
Panamp bụ a music ọkpụkpọ maka iOS ngwaọrụ, gụnyere iPhone na iPod aka. Ọ na-akwado iOS 7. Ọ na-mara maka ike 'queues' nke ọrụ nwere ike ịmepụta si ha mmasị tracks ke laa. Ya nwere ọgụgụ isi playback njikwa ịnọgide na ihuenyo, nke bụ inweta mgbe niile, àjà ọrụ siri ike ogbugbu njikwa.
Exfm ohere ọrụ iji kpokọta ha onwe ha hụrụ n'anya song ọnụ a profaịlụ na-eso ndị soro ha. Ọ na-arụ ọrụ ụkpụrụ a: ị mepụtara a na profaịlụ ma pịa obi icon ma ọ bụrụ na ị na-amasị abụ na ị na-anụ. Na-achọpụta ọhụrụ egwu, ị pụrụ ịgbaso ndị mmadụ na-anụ ihe ha na hụrụ n'anya. Ọ iche nsụgharị maka iOS 7 ngwaọrụ, iPhone, iPod aka, na iPad.
Lisnr bụ a music ngwa n'ihi na iOS 7 ngwaọrụ ebelatakwa oge anya n'etiti nka na Fans. Site na iji ya, artists pụrụ ịnapụta ọhụrụ ha songs Fans na-ege ntị tupu ekwusara ha, ma ọ bụ na-agba ndị mmadụ ịga concerts. Na nke a bụ elele na bonuses artists nwere obi ụtọ napụta. Na nke a bụ nanị ọdịnaya ga-anapụta ọrụ ekwentị ngwa ngwa na-adọ.
TunesIn Radio-aghọ ndị ọzọ mara site na ndị mmadụ, na-anọkarịrị n'ihi na ọ gụnyere 100000 + ndụ na redio ụgbọ, ekpuchi music, ozi ọma, egwuregwu, ikwu okwu, na ntochi gụgharia, 2 nde pọdkastị, concerts na-egosi na gị na iOS 7 ngwaọrụ, gụnyere iPhone, iPad na iPod aka. Site na iji ya, ị nwere ike ị kwụsịtụ ma weghachi ndụ redio.
PS: Ọ bụrụ na ị ebudatara ụfọdụ songs ebe na na gị iPhone, i nwere ike ịgbalị Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) iji nweta ndị a songs depụtaghachiri gị iTunes Library on gị na kọmputa.
Olee otú iji dozie nsogbu - Music bụghị syncing mgbe iOS 7 Update